Man on Fire (2004) | MM Movie Store
နှုတျခမျးမှေး မုတျဆိတျမှေး ဗရပှနဲ့ လူတဈယောကျ…သူက အတိတျက လုပျခဲ့တဲ့ ကိစ်စတဈရဲ့ အမှားတဈခြို့ ကိုမပြေ့ောကျဖို့ အတှကျအရကျကို အခြိနျပွညျ့နီးပါးအဖျောပွုနတေဲ့သူ….တဈနတေ့ော့ သူ့သူငယျခငျြးတဈယောကျက လာပွောတယျ
ဒီအတိုငျးနမေယျ့အတူတူ အပွုအမူလေးတှဆေငျခွငျပွီးတော့ ခမျြးသာတဲ့ အသိုငျးအဝနျးက အိမျမှာ ဘျောဂီဂတျလုပျဖို့ အကွံပေးလာတယျ… သူဟာ အတိတျတုနျးက စဈမှုထမျးခဲ့ပွီး စဈမှုထမျးသကျလညျး အတျောရှိခဲ့ပွီး ထူးခြှနျြခဲ့တဲ့သူတဈယောကျ..ဘောဒီဂတျလုပျရမှာကပွနျပေးမှုအမြားဆုံးဖွဈနတေဲ့ မက်ကဆီကို ..သူဒီအလုပျကိုလကျခံလိုကျတယျ….
ဒီကားက တျောတျောမြားမြားကွားဖူး ကွညျ့ဖူးပွီးသားဖွဈမှာပါ…ဒါရိုကျတာTony Scott ရိုကျကူးပွီးကြှနျတျောတို့ရဲ့ အသညျးစှဲမငျးသားကွီး Denzel Washington, ပါဝငျသရုပျဆောငျထားပါတယျ…
ပရိယာယျမြားပွီး ဘယျကိစ်စမဆို ယုံကွညျလို့မရတဲ့ ဒီလောကကွီးမှာ ကြှနျတျောကတော့ Denzel Washington, ရိုကျတဲ့ ကားတှကေို ခြှငျးခကျြထားလိုကျခငျြတယျ..သိတဲ့အတိုငျး သူ့ကားတှဟော မကောငျးတဲ့ကားတောငျမရှိသလောကျရယျ…ဒီကားမှာလညျး တိုတိုပွတျပွတျပွောပွီးအလုပျကိုတာဝနျကတြေဲ့သူတဈယောကျ…
သူ့စောငျ့ရှောကျရတဲ့ကလေးမလေးအပျေါ သမီးလေးတဈယောကျလိုသံယောဇဉျတှယျပွီး တဖွညျးဖွညျးပွောငျးလဲလာတဲ့ ဆကျဆံရေး…ရှုတျထှေးပှလေီလှတဲ့ ကလေးငယျပွနျပေးဆှဲမှုတှေ….ကြှနျတေျာ့လိုခပျကွောငျကွောငျ ကားတှကွေိုကျတဲ့သူတှအေဖို့ ကွညျ့သငျ့ပါကွောငျး မဝံမရဲတိုကျတှနျးပါရစေ…
နှုတ်ခမ်းမွေး မုတ်ဆိတ်မွေး ဗရပွနဲ့ လူတစ်ယောက်…သူက အတိတ်က လုပ်ခဲ့တဲ့ ကိစ္စတစ်ရဲ့ အမှားတစ်ချို့ ကိုမေ့ပျောက်ဖို့ အတွက်အရက်ကို အချိန်ပြည့်နီးပါးအဖော်ပြုနေတဲ့သူ….တစ်နေ့တော့ သူ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က လာပြောတယ်
ဒီအတိုင်းနေမယ့်အတူတူ အပြုအမူလေးတွေဆင်ခြင်ပြီးတော့ ချမ်းသာတဲ့ အသိုင်းအဝန်းက အိမ်မှာ ဘော်ဂီဂတ်လုပ်ဖို့ အကြံပေးလာတယ်… သူဟာ အတိတ်တုန်းက စစ်မှုထမ်းခဲ့ပြီး စစ်မှုထမ်းသက်လည်း အတော်ရှိခဲ့ပြီး ထူးချွန်ခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက်..ဘောဒီဂတ်လုပ်ရမှာကပြန်ပေးမှုအများဆုံးဖြစ်နေတဲ့ မက္ကဆီကို ..သူဒီအလုပ်ကိုလက်ခံလိုက်တယ်….
ဒီကားက တော်တော်များများကြားဖူး ကြည့်ဖူးပြီးသားဖြစ်မှာပါ…ဒါရိုက်တာTony Scott ရိုက်ကူးပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ အသည်းစွဲမင်းသားကြီး Denzel Washington, ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်…
ပရိယာယ်များပြီး ဘယ်ကိစ္စမဆို ယုံကြည်လို့မရတဲ့ ဒီလောကကြီးမှာ ကျွန်တော်ကတော့ Denzel Washington, ရိုက်တဲ့ ကားတွေကို ချွင်းချက်ထားလိုက်ချင်တယ်..သိတဲ့အတိုင်း သူ့ကားတွေဟာ မကောင်းတဲ့ကားတောင်မရှိသလောက်ရယ်…ဒီကားမှာလည်း တိုတိုပြတ်ပြတ်ပြောပြီးအလုပ်ကိုတာဝန်ကျေတဲ့သူတစ်ယောက်…
သူ့စောင့်ရှောက်ရတဲ့ကလေးမလေးအပေါ် သမီးလေးတစ်ယောက်လိုသံယောဇဉ်တွယ်ပြီး တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာတဲ့ ဆက်ဆံရေး…ရှုတ်ထွေးပွေလီလှတဲ့ ကလေးငယ်ပြန်ပေးဆွဲမှုတွေ….ကျွန်တော့်လိုခပ်ကြောင်ကြောင် ကားတွေကြိုက်တဲ့သူတွေအဖို့ ကြည့်သင့်ပါကြောင်း မဝံမရဲတိုက်တွန်းပါရစေ…